Vaovao momba ny fifandraisana ara-pahalalana any Afrika - AfricaArXiv
Vaovao momba ny Fifaneraserana Scholarly atsy Afrika
Podcast: AfricArXiv sy TCC Africa Partnership for African Research Visibility
Tamin'ny Oktobra 2021, AfricArXiv, ny African Open Access Portal, dia nanambara fiaraha-miasa amin'ny Foibe fanofanana amin'ny Fifandraisana TCC Africa hanangana sy hitantana vondrom-piarahamonina manam-pahaizana iraisam-pirenena izay hanatsara ny fahitana ny fikarohana Afrikana. Joy Owango avy amin'ny TCC…
Eider Africa, PREreview, AfricArXiv, ary TCC Africa dia mamolavola taranja handraisana ireo mpikaroka afrikanina bebe kokoa amin'ny peer Review
Eider Africa, PREreview, AfricArXiv, ary ny Centre Training in Communication (TCC Africa) dia miara-miasa amin'ny fandaharan'asa fanofanana vaovao ho an'ny mpikaroka any am-piandohana ka hatramin'ny antenatenan'ny asa any Afrika, tarihin'ny eLife. Ny fianarana dia mikendry ny hanentana ny saina momba ny preprints ary manasa ireo mpikaroka / manam-pahaizana afrikanina amin'ny famerenana misokatra ny preprints.
Ny maraina vaovao ho an'ny mpikaroka afrikanina rehefa nanambara ny fiaraha-miasa ara-pomba ny TCC Africa sy AfricArXiv
Ny Centre Training in Communication (TCC Africa), miorina ao amin'ny Oniversiten'i Nairobi, Kenya, ary ny vavahadin-tserasera pan-African Open Access AfricArXiv dia manambara ny fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny tanjona amin'ny famoronana fomba fiasa stratejika sy maharitra maharitra amin'ny fananganana sy mitantana vondrom-piarahamonina manam-pahaizana iraisam-pirenena izay hanatsara ny fahitana ny fikarohana Afrikana.
Fomba fijery afrikanina amin'ny famerenan'ny mpiara-mianatra: adihevitra boribory
Ny AfricaArXiv, Eider Africa, TCC Africa, ary ny PREreview dia faly mandray hevitra mandritra ny 60 minitra maharitra latabatra, hitondra ny fomba fijery afrikanina amin'ny resaka eran-tany mandritra ny lohahevitra nandritra ny taona ho an'ny Peer Review Week, “Identity in Peer Review”. Miaraka amin'ny tontolon'ireo mpampanonta afrikana, mpandinika ary mpikaroka asa vao haingana, hizaha ny mombamomba ireo mpikaroka ao amin'ny kaontinanta afrikanina, avy amin'ny fomba fijery mibaribary izay mahita azy ireo ho mpanjifan'ny fahalalana novokarina tamin'ny sehatra hafa ho an'ireo mpikaroka izay mirotsaka an-tsehatra. amin'ny fanadihadian'ny mpiara-mianatra. Hiezaka izahay hamorona toerana azo antoka hisaintsainana ny olan'ny fahalalàn'ny fahalalàna ny siansa, ny fitongilanana amin'ny famerenan'ny mpiara-belona ary ny fomba fanavahana ny mpandinika ny mpiara-miasa.
Fiteny afrikanina hahazoana teny siantifika mihoampampana
Ny Decolonise Science dia hampiasa mpandika teny hiasa amin'ny taratasy avy any AfricaArXiv izay ny mpanoratra voalohany dia Afrikana, hoy ny mpikaroka lehibe Jade Abbott, manam-pahaizana manokana momba ny milina monina ao Johannesburg, Afrika Atsimo. Ny teny izay tsy manana mitovy amin'ny fiteny kendrena dia hasiana saina mba hahafahan'ny manampahaizana manokana momba ny voambolana sy ny mpampita hevitra siantifika mamorona teny vaovao. "Tsy toy ny fandikana boky, izay mety misy ireo teny ireo," hoy i Abbott. "Fanatanjahan-tena mamorona teny ity."
Miantso ny fandefasana, siansa decolonise
Ny ekipa ao amin'ny AfricaArXiv dia faly manambara fa miara-miasa amin'ny Masakhane izahay amin'ny fananganana korontana marobe amin'ny fikarohana afrikana avy amin'ny fandikan-teny ireo sora-tanana fikarohana natolotra an'i AfricaArXiv. Amin'ireo lahatsoratra natolotra, ny ekipa ao amin'ny Masakhane sy ny AfricaArXiv dia hisafidy hatramin'ny 180 ny totalina amin'ny fandikana azy.
Antony dimy tokony hanoloranao an'i AfricaArXiv
Amin'ny alàlan'ny fandefasana ny asanao amin'ny alàlanay amin'ireo serivisy fitahirizam-bolan'ny mpiara-miasa amintsika dia afaka maneho ny valim-pikarohany sy hifandray amin'ireo mpikaroka hafa ao amin'ny kaontinanta afrikana ary maimaimpoana manerantany. Ny toeram-pivarotanay mpiara-miasa rehetra dia manendry DOI (mari-pahaizana momba ny zavatra niomerika) sy fahazoan-dàlana misokatra ho an'ny manam-pahaizana (mazàna CC-BY 4.0) amin'ny asanao miantoka ny fahitanao ny tahiry fikarohana amin'ny alàlan'ny serivisy fanoratana Crossref.
Fandikan-teny fikarohana AI sy Seamless an'ny fiteny ofisialy ofisialy
“Amin'ny fandrosoan'ny Processing Language Natural (NLP), dia tokony ho mora ho an'ireo mpandahateny tsy Indoneziana [na Afrikana] ny mahatakatra ireo lahatsoratra nosoratana tamin'ny tenim-paritra indonezianina [na afrika afovoany eo an-toerana]. Noho izany, ny enta-mavesatra amin'ny fampiasana avy hatrany ny teny anglisy ho fiteny lehibe amin'ny siansa dia azo ahena. "
Manambara ny #FeedbackASAP avy amin'i ASAPbio
Ny ASAPbio dia miara-miasa amin'ny DORA, HHMI, ary ny Chan Zuckerberg Initiative handraisana adihevitra momba ny famoronana kolontsaina fandinihana imasom-bahoaka sy fanamarihana momba ny fanomanana mialoha. Vakio ny fanambaràna feno ASAPbio ary fantaro ny fomba fisoratana anarana amin'ilay hetsika ary hanohanana ny famerenenana mialoha.